Buundada degmada Afgooye
Dadka ku nool xaafadda Cusmaan Durre ayaa VOA u sheegay in diyaaradda ay kusoo dhacday halkaas. Waxa ay intaas ku dareen in deegaanka ay maamulaan maleeshiyada Al-Shabaab.
Wararka ka imanaya Soomaaliya ayaa sheegaya in diyaarad yar ay kusoo dhacday xaafad ku dhow degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose, oo 30 KM u jirta galbeedka Muqdisho.
Illaa iyo hadda lama garanayo waxa sababay in diyaaradda ay soo dhacdo, balse dadka deegaanka ayaa sheegaya in diyaaradda ay ku dul wareegatay hawada, ka hor inta aanay u jiheysan galbeedka magaalada.
Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika, ayaa u jiheystay goobta ay diyaaradda ka dhacday, oo u dhow degmada Afgooye, hase yeeshee roobab xooggan ayaa caqabad ku ah howl-galkooda, sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose.
Weriyaha VOA ee Muqdisho Jacfar Kukay ayaa kasoo xigtay saraakiisha Amisom in diyaaradda ay ahayd mid aan diiwaan gashneyn.
Ilo wareedyo codsaday inaan la magacaabin ayaa VOA u sheegay in diyaaradda ay u kireysneyd qandaraaslayaal la shaqeeya Amisom. Waxa kale oo ay sheegeen in 9 illaa 11 qof loo maleynayo inay saran yihiin diyaaradda.
Afhayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa VOA u sheegay in diyaaradda aysan saarneyn wax dad Mareykan ah. Waxa kale oo uu sheegay in diyaaraddaas laga lee yahay Kenya.
Saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa VOA u sheegay inay u maleynayaan in diyaaradda iyo dadkii saarnaaba ay u gacan galeen kooxda Al-Shabaab.
Xaaladda duuliyayaashii saarnaa diyaaradda iyo rakaabkiiba weli lama oga.
Diyaaradda ayaa lagu warramay inay kasoo baxday magaalada Nairobi, kuna wajahneyd garoonka Ballidoogle oo 90 KM dhinaca galbeed kaga began Muqdisho.